I-Ultrasonically-Assured Emulsification - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "I-Ultrasonically-Assured Emulsification"
I-ultrasonication enamandla iyindlela eqinisekisiwe yokulungisa isimiso se-macro-ne-nano-emulsion, ama-emulsions amabili kanye ne-pickering emulsions. I-Nano-emulsions yi-emulsions ne-nano-size phase ehlakazekile futhi ukulungiswa kwabo kudinga ukufaka amandla okufaka amandla okusabalalisa amaconsiktshi kuya ku-nano-usayizi. Emulsions inezinto eziningi ezivela ekudla, ubisi, imithi yokwenza upende kanye nezimboni zamafutha. Amaprosesa ase-Hielscher nama-reactors ahlinzeka nge-high-performance ultrasound ukuthola ama-emulsions aphezulu. Funda kabanzi mayelana nezinhlelo zethu ze-ultrasonic kanye ne-ultrasonically-basizwa emulsification!